Warbixin: Waa kuwee 5ta saxiix ee ugu waa weeyn ee dhacaya Todobaadyada soo aadan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Warbixin: Waa kuwee 5ta saxiix ee ugu waa weeyn ee dhacaya Todobaadyada soo aadan?
(07-07-2018) Xilli aynu ku jirno maalmihii ugu dambeeyay ee koobka adduunka kooxaha premier League badankooda ayaa ku soo laabtay tababarka isku diyaarinta xilli ciyaareedka cusub.
Iyada oo ay 3 todobaad oo kaliya u dhexayso dhamaadka koobka adduunka iyo xidhitaanka suuqa kala iibsiga Premier Leagau waxa jira waxyaabo badan oo ka socda albaabada xiran dabadooda.
Wayne Rooney ayaa wakhti hore ka tagay premier League isaga oo ku biiray DC United halka kooxaha Liverpool,Man United iyo Arsenal mashquul ahaayeen dhamaantood.
Si kasta ha ahaatee waxa jiri doona saxiixyo la dhamaystiri doono ka hor inta uuna suuqu xirmin 9 bisha August.
Waxana aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa shanta saxiix ee waaweyn ee la filayo in ay dhacaan ka hor inta uuna suuqu xirmin sida laga soo xigtay wargayska Daily Mirror.
Cristiano Ronaldo -> Juventus:9-kii sano ee Cristiano Ronaldo ee Real Madrid ayaa u muuqda mid sii dhamaanaya iyada oo uu xiddigu ku dhawyahay in uu ku biiro kooxda Juventus, Xiddigii hore ee Man United ayaa heshiiska shaqsiga ah la gaaray kooxda ka dhisan Turin kadib markii ay Juventus dalab 100 milyan ah ka gudbisay bilowgii todobaadkan.
Riyad Mahrez -> Manchester City:Man City ayaa ugu dambayn gacanta ku dhigtay xiddigoodii iyada oo la filayo in uu Riyad Mahrez todobaadkan si Rasmi ah ugu biiro kooxda, Xiddiga reer Argentina ayaa sanadkii ugu dambeeyay isku dayay in uu ka tago Leicester city waxa uu xiddiga tijaabada caafimaadka u mari doonaa kooxda city todobaadkan isaga oo ugu dambayn heli doona rajadiiisii.
Yerry Mina -> Everton:Xiddiga reer Colombia ayaa wacdaro ka dhigay koobka adduunka Sanadkan waxana uu xiiso ka helay kooxo badan oo reer yurub ah oo ay ka mid yihiin Everton iyo Liverpool, laakiin Fenerbahce ayaa ah kooxda hogaaminaysa tartanka 23 jirkan iyada oo la sheegayo in ay ka gudbisay dalab 30 milyan ah laakiin kooxda Everton ayaa wadahadalo kula jirta kooxda Barcelona.
Nabil Fekir -> Liverpool: Taageerayaasha Liverpool ayaa u maleeyay in Nabil Fekir uu ku soo biiray kooxda bishii Hore laakiin heshiiskii 53-ka milyan ahaa ayaa ugu dambayn bur-buray, Laakiin waxa ay haatan u muuqataa in ay dib ugu laabatay wadahadalada xiddiga iyaga oo doonaya in ay dhamaystiraan saxiixa xiddigan kadib koobka addduunka kadib markii uu xiddigu u sheegay in uu doonayo in uu ku biiro Liverpool.
Lucas Torreira -> Arsenal:Xiddiga reer Uruguay ayaa Gunners ugu soo biiray heshiis ku kci doona 25 milyan oo euro laakiin waa marka uu ka soo laabto Russia oo uu xulkiisu ka haray koobka adduunka Shalay kadib markii ay guuldaro 2/0 ah kala kulmeen France.